Massimiliano Allegri oo ka warbixiyay kooxda ugu cad cad ee sanadkan ku guuleysan karta tartanka Champions League – Gool FM
(Champ’ League) 27 Nof 2018. Juventus ayaa caawa ku soo dhaweyn doonta kooxda Valencia Allianz Stadium, si ay u wada ciyaaraan kulankooda lugta labaad heerka Group-yada ee tartanka xiisaha badan Champions League.
Macalinka reer Talyaani iyo kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa wuxuu xaqiijiyay in Bianconeri ay si talaabo talaabo ah ay ugu socon doonto howlgalkeeda tartanka Champions League.
Dhinaca kale Massimiliano Allegri ayaa wuxuu tilmaamay aragtidiisa kaga aadan in kooxda reer Spain ee Barcelona ay tahay kooxda ugu dhow ee xili ciyaareedkan ku guuleysan karta tartanka Champions League.
Macalinka reer Talyaani ayaa shir jaraa’id uu horey kaga soo muuqday kahor kulankii Manchester Unite wuxuu kaga hadlay in kooxdiisa ay ciyaari doonto kulamo aad u adag inta ka harsan sanadkan.
“Waxaa jira kulamo badan aan ka ciyaari doono horyaalka Talyaaniga, waxaa jira sidoo kale kulamo adag aan ciyaari doono ilaa iyo dhamaadka sanadkan, sida kooxaha Roma, Inter, Atalanta, Fiorentina iyo Sampdoria”.
“Laakiin tartanka Champions League waa inaan si tartiib tartiib ah aan talaabo ugu qaadnaa, waxaan dooneynaa inan u gudubno wareega xiga ee 16-ka, inagoo hogaamineyna group-keena”.
“sida ay ila tahay Barcelona waa kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta xili ciyaareedkan tartanka Champions League, intaas kadib waxaa jira kooxo badan ay sidoo kale kooxdeena qeyb ka tahay, ee rajo ka qaba inay guuleystaan, waxaan heysanaa rabitaan isku mid ah ee ku aadan sanad walba”.
Si kastaba kooxda lagu naaneyso marwada duqda ah ayaa hogaamineysa Group H ay qeybta kaga tahay tartanka Champions League, waxayna leedahay 9 dhibcood, halka Manchester United oo kusoo xigta ay iyadana soo uruursatay 7 dhibcood, halka Valencia ay booska 3-aad la fadhido 5 dhibcood.
Maxamed Saalax oo SAWIRKAN ku weeraray Xukuumada Dalkiisa Masar....(SHEEKO YAAB leh oo ka dambeysa)